कसरी म Digg (मेरो गल्ती) द्वारा दफन गरियो Martech Zone
कसरी म Digg (मेरो गल्ती) द्वारा दफन गरियो
तपाईंहरू जो मेरो ब्लगको नियमित पाठकहरू हुनुहुन्छ, तपाईंलाई थाँहा छ कि म प्रयोग गर्छु ... धेरै! सायद धेरै! यस हप्ताको सुरूमा मैले प्रयोगकर्ता सबमिटरको लागि साइन अप गरें। यो एक सेवा हो जुन पहिचान गरिएको छ भर्खरको वायर्ड लेख जहाँ लेखको लेखकले Diggs प्राप्त गर्न भुक्तान गर्‍यो on Digg.com.
यहाँ कसरी कार्य गर्दछ भन्ने बारे छ ... कसैले प्रयोगकर्ता बुझाउनेलाई भुक्तान गर्दछ र तिनीहरूले पैसा डिग्ग प्रयोगकर्ताहरूसँग विभाजित गर्दछन्, जसले बदलीमा कथा खोल्दछन्। तपाईंलाई सत्य भन्नको लागि प्रणाली वास्तवमै क्लन्की छ। तपाइँ कस्टम फिड URL प्राप्त गर्नुहुन्छ जसले तपाइँलाई Digg मा कस्ता कथाहरू बताउँछ। त्यसोभए तपाईं खन्नु कथा। त्यसोभए तपाईंले रिपोर्ट गर्नको लागि प्रयोगकर्ता सबमिटरमा पुन: लगइन गर्नुपर्नेछ खोतल्नु कथा। त्यस पछि, तपाइँको खन्नु 'प्रमाणित' हो। मलाई थाहा छैन कि त्यो के बनेको छ, तर यो निश्चित रूपमा स्वचालित छैन।
मलाई लाग्छ कि प्रयोगकर्ता सब्मिटरको अपरेटरहरू उनीहरू कसरी आफ्नो व्यवसायको बारेमा जान्न सतर्क हुनुपर्छ। यदि ती सामग्रीको लागि लगातार Digg स्क्र्याप गर्दै छन् भने, म निश्चित छु Digg उनीहरूमा छिटो हुन्छ। यदि तपाईं एक प्रयोगकर्ता सबमिटर प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ, म प्रमाणित गर्न सक्दछु कि तिनीहरू तपाईंसँग धेरै छिटो छ!
प्रयोगकर्ता सबमिटरको साथ मेरो क्यारियर आज आधिकारिक रूपमा समाप्त भयो। मैले Digg.com मा लग ईन गर्ने प्रयास गर्दा निम्न सन्देश प्राप्त गरें:
र मेरो भव्य आय के थियो?
मलाई यो कुरा स्वीकार गर्न लाज लाग्छ कि मैले डिग्ले मलाई दफन गर्नु भन्दा पहिले $ ०.0.50० बनाएको थियो। वास्तवमा, मैले केहि बनाएको छैन किनकि मसँग प्रयोगकर्ता सब्मिटरबाट $ ०.0.50० स collecting्कलन गर्ने मसँग कुनै साधन छैन।
त्यसोभए मैले के सिके? के डिगलाई दुरुपयोग गर्न सकिन्छ? पक्का, तर तिनीहरू हो हेर्ने र यी मुद्दाहरूको असफल गर्ने तिनीहरूको क्षमता सुधार गर्ने। के प्रयोगकर्ता बुझाउने ख्याल राख्नुहुन्छ? म अनुमान लगाउँदै छु कि उनीहरूले सम्भवत: Digger बायाँ र दाँया फ्याँकिदै छन्… र टकसालको साथ टाढा हिँडिरहेका छन्। प्रयोगकर्ता बुझाउने व्यक्तिसँग प्रयोग गरेपछि, मेरो सल्लाहमा जान्छ पर राख। यो बटमा दुखाइ हो, समयको बर्बादी हो र पैसा कमाउन लायक छैन जुन तपाईंले कमाउन सक्नुहुन्छ वा गर्न पनि सक्नुहुन्न।
विशेष गरी यदि तपाइँ Digg मनपराउनु हुन्छ। म एक ठूलो प्रशंसक होइन, तर मलाई दु: खी छ कि मैले बुट पाएको छु।
माफ गर्नुहोस् Digg! माफ गर्नुहोस् केभिन, ओवेन, निकोल, ब्रायन, स्टीव, अमर, डान, डानियल, एली, जे, जोन, माइक, रॉन, स्कट, र कालातीत!
त्यसैले म भन्छु ...
मार्क्स 4, 2007 मा 6: 39 PM
सायद तपाईले आफ्नो पछाडि घूस गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंले बनाएको आधा बक को लागी ..
हे प्रतीक्षा गर्नुहोस् तपाईंले जे भए पनि यो प्राप्त भएन, लानत मान्छे .. अब यो lol दुख्छ
मार्क्स 4, 2007 मा 7: 10 PM
🙂 म खुसीसाथ ents० सेन्ट भुक्तान गर्नेछु डिगको मनपर्ने संस्थालाई!